I-Thelxis Suite ΙΙ - Ama-Suites Okusha Kokubuka Kolwandle!
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Premium Vacation Homes
Isakhiwo esisanda kwakhiwa ngomklamo wesimanje kanye nazo zonke izinto zesimanje I-Thelxis suites itholakala endaweni enezintaba ezivundile zezihlahla zomnqumo nezihlahla zomsayiphuresi endaweni yase-Agios Nikolaos Volimon, indawo ekahle yokuphumula amaholide enombono ongavinjwanga, obonakalayo oLwandle i-Ionian, Isiqhingi sase-Agios Nikolaos, i-Kefalonia kanye nogu olusempumalanga yesiqhingi.
Ama-suites ahlanganisa ngokuvumelana ubuhle bendawo ye-Zakynthian nezakhiwo zesimanje futhi anikeze ukuthula okuphelele kude nomsindo wempilo yansuku zonke ngokubuka okumangalisayo koLwandle lwase-Ionian. Ngomklamo olula, wesimanje, ama-suites amabili azimele azungezwe izindonga zamatshe ezihlaba umxhwele ezivumelana ngokuphelele nendawo yemvelo, ezanelisa izidingo zezivakashi zobumfihlo obuphelele. I-suite ngayinye engu-65sq.m ingakwazi ukuhlalisa izivakashi ezi-4 kuya kwezi-5 ngokunethezeka futhi inamakamelo okulala amabili anendlu yokugezela yangasese egunjini lokulala elikhulu kanye negumbi lokuphumula elivulekile elinekhishi elihlome ngokuphelele. Iminyango emikhulu ye-balcony kuwo womabili ama-suites iholela endaweni evulekile futhi ehlome ngokugcwele namachibi angapheli ngenkathi ivumela ubuhle bemvelo ukuthi buhlasele ingaphakathi. Akukho okungaqhathaniswa nokucwiliswa okuqabulayo endaweni yakho enethezekile ngokubuka okungenakuqhathaniswa kokuluhlaza okwesibhakabhaka okungapheli kwe-Ionian Sea, into i-Thelxis Suites eyinikeza ngokukhululekile izivakashi zabo.
I-Agios Nikolaos Volimon ingenye yezindawo ezisezingeni eliphezulu esiqhingini kude nomsindo wokuvakasha kwabantu abaningi futhi iyinketho ekahle kulabo abafuna ukuhlanganisa ikhwalithi nokuthula nokuthula kwendawo. Inetheku elihle elinezindawo eziningi zokudlela ezisogwini lolwandle nezitolo zezivakashi. Kukhona futhi ukuhamba ngezikebhe okuningi kwansuku zonke emigedeni eluhlaza okwesibhakabhaka enamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka kanye nokuphahlazeka komkhumbi okudumile. Ukusuka echwebeni ungavakashela futhi isiqhingi esingumakhelwane saseKefalonia.
Ibungazwe ngu-Premium Vacation Homes
UPremium Vacation Homes Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 00001241415
Izilimi: English, Deutsch, Ελληνικά